Ilmo soo ridid ​​nabadgelyo leh koorsooyinkayaga internetka.
Koorsooyinka Onlaynka ah
Xulo koorsada danahaaga ah
Koorsooyin si gaar ah loogu talagalay daneeyayaasha xirfadleyda ah ee ilmo iska soo ridka caafimaad ee aaminka ah. Xulo koorsada adiga kugu habboon.
Dawooyinka Ilmo Iska Soo Ridka Ee Goobaha Gargaarka Bina-Aadamnimada
Koorsadan onlaynka ah waxaa loogu talagalay iyada oo ujeedkeedu tahay kordhinta aqoonta ku saabsan iyo helitaanka ilmo iska soo rididda (ama ilmo iska soo ridka la isticmaalo kaniiniyada) goobaha bani'aadamnimada. Macluumaadka aad ku baran doonto koorsadan, waxaad ka caawin kartaa inaad hubiso in ilma iska soo rididda kiniiniga ahi ay tahay mid badqabto, la heli karo, oo ammaan ah. Koorsadan waxaa lagu soo saaray iskaashi u dhexeeya Médecins Sans Frontières iyo www.HowToUseAbortionPill.org
Ilmo iska soo ridid ​​is -maamulay
Koorsadan onlaynka ah waxaa loogu talagalay qof kasta oo raadinaya inuu wax badan ka barto is-maamulidda ilmo iska soo rididda, ama ilmo iska soo ridid guriga. Macluumaadka aad ku baran doonto koorsadan, waxaad ku caawin kartaa in la hubiyo in ilmo iska soo rididda kiniinku ammaan tahay, la heli karo, oo aamin ah. Koorsadan waxaa lagu soo saaray iskaashi dhex mara Médecins Sans Frontières iyo www.HowToUseAbortionPill.org